Linux 5.10 ichaita Windows mitambo inomhanya zvirinani paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Linux haisi iyo yakanakisa chikuva yemitambo yemavhidhiyo chinhu chatinodzokorora nguva dzese dzatinotaura nezvekutamba pakombuta makomputa, asi nekufamba kwenguva zvinhu zvinova nani. chiutsi Zvinobatsira zvakanyanya kuti isu tinogona kutamba zvinonakidza mazita paLinux, uye isu zvakare tine zvakawanda zvekutenda Feral Interactive, uyo anounza maWindows mitambo kuLinux uye macOS, asi mumwedzi mishoma zvinhu zvinogona kugadzirisa, zvichienderana nekuburitswa kwe Linux 5.10.
Panguva ino, Linux 5.10 haina kana kupinda muchikamu chekuvandudza. Muchokwadi, Linux 5.9-rc2 ichaburitswa mangwana, vhezheni inosvika seyakagadzikana mukati memavhiki matanhatu. Asi izvi hazvireve kuti haugone kutaura nezve hurongwa hweramangwana, senge rauri kuita nharo parizvino, zvakanyanya chigamba (kuburikidza Phoronix) iyo yaizogadzirisa matambudziko mumaapps anoshandisa SLDT ayo anokonzeresa kupunzika nekuvharwa kana achimhanya pane masisitimu ane UMIP akagoneswa.
Linux 5.10 ichasanganisira SLDT / STR kutevedzera uye WINE mitambo ichavandudza
Gore rakapfuura, WINE yakawedzera kuteedzera kune mamwe maCUU mirairo yainge yakavharirwa neUMIP (Mushandisi-Mamiriro Ekudzidzisa Kudzivirira), chiitiko chakaitwa mune yazvino Intel uye AMD processor. Linux 5.10 ichaunza kutsva kutsva kweayo maviri mairairo kuyedza uye kubatsira aya maWindows application anoshanda zvirinani paLinux. Zvikurukuru, Brendan Shanks weCodeWeavers akawedzera rutsigiro rweUMIP kodhi yeiyo kuteedzera kweSLDT uye STR mirairo.
Iyo chigamba inobvumidza iyo SLDT uye STR mirairo kuti ishatiswe kana kuteedzerwa neiyo kernel mu Intel uye AMD mapuratifomu ane UMIP akagoneswa. Izvi zvisati zvaitika, mirairo yaisagona kuteedzerwa nekuti yaisawanzoshandiswa muzvirongwa zvinoshanda paWineHQ kana DOSEMU2.
Kana pasina chinhu chinokumanikidza iwe kugadzirisa iyo ajenda, Linux 5.10 ichave yakaburitswa muna Zvita 6 uye iyi ndeimwe yenhau shoma dzinozivikanwa kusvika parizvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mitambo yeWindows paLinux kuburikidza neWINE ichashanda zvirinani nekuda kweLinux 5.10
Parizvino wow anoshanda zvirinani newaini mu fedora pane mune akafanana windows 10.
Uye se? Linux inoshamisa nemitambo, ini ndinotamba Minecraft mashoma mitambo, muto mudiki uye hupenyu hwangu hwagadziriswa